China Hụ Ndochi Agbanwe China Manufacturers & Suppliers & Factory
Hụ Ndochi Agbanwe - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Hụ Ndochi Agbanwe)
Ọhụụ 150W Led Low Bay
1. Led Low Bay Ngwado ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. Led Low Bay Fixtures 150W bụ waterproof IP65 maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Led Low Bay ahịa ọkụ bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide...
75W Na-agbaso Ndazi Oge Ọgbara ọhụrụ
50W Na-agbaso Ndazi Oge Ọgbara ọhụrụ
Bbier 50W Ejiri Oge Azu Ugboro elu Ngwado nwere nnukwu ihe na-egbukepụ egbukepụ ọkụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a na-emepụta oge a na-arụ ọrụ na ntanetị nke ọma maka oge 50000 nke ndụ. Ihe a na-eme ugbu a n'elu eriri 50W kwesịrị ekwesị Mee 2-3 / 8 anụ ọhịa na anụ ọhịa 3 anụ ọhịa iji wụnye ọkụ...
9W Na-ahụ na Led Corn Cob Light Bulbs
Akwa mma 9w E27 oka Cob Led : Nnukwu ọkụ Chandelier bulb 25 Watt Equivalent, High efficiency, 9W ike oriri. Nke a Na-ekpuchi ya na Bulbs nwere oghere ọkụ nke 360 ​​Celsius, 88% ọzọ ike nchekwa na-atụle ìhè ọkụ. Long Life ọka cob Ikanam ọkụ: Energy azọpụta na ogologo ọrụ ndụ 50,000 hours.The "ọka" imewe...
IP65 Dọm Gburugburu Ebe Ọhụụ 75W 9750Lm
IP65 Dọm Gburugburu Ebe Ọhụụ 75W 9750Lm Ọ dịghị mkpa maka iji aka na-arụ ọrụ mere Area osisi ìhè 75W dị ka igwe na-arụ ọrụ na ụtụtụ foto na-achọpụta ìhè iji mee ka ọ gbanyụọ. Ejikọta ya na ememe ọkụ nke 250W , nke a 75W Ọhụụ n'èzí na- enye gị ike ịdị mma nke ịdị arọ 9750lm ma nwee ọganihu pụrụ iche Post Lighting...
Hụ Ndochi Agbanwe 250W Na-edebe Ndochi Agbanwe Hichapụ Ngwongwo Agbanwe Led Hichapụ Mpempe Agbanwe Ụzọ Ejiri Agbanwe Ala Mkpọchi maka Mgba Igwe Azụ Na-enwu Mkpọchi na-enwu enwu